CJ dzino High Strength Anti Impact Hydraulic Grip Rebar payakabatanidzwa System
BCJ Dzinochinja Coupler
FCJ Positive uye akaipa Thread Coupler
Rebar Cold Agumbuka nokuchengetedza Machine
Murongi & Feeder Machine
Kucheka mashizha nokuti rumbabvu peeling
Related zvishandiso handingadariki zvikamu
Roller nokuti Thread Rolling Machine
Rebar vakafugama Machine
2017 - Iva paakavapa UKAS Quality System advertising ne UK advertising MASIMBA FOR muedzo STEELS (nekufunganya), uye Hebei Yida mwero coupler zvibereko φ16-40mm vakanga yakatenderwa hanya TA1-B. Akakunda simbi bhaa splicing zvaidiwa pamusoro renyukireya simba chirimwa chokuvaka pakati Xiapu uye Zhangzhou
2016 - Iva paakavapa ari Qualified nokutengesa CHINA Zvenyukireya BUILDING ACHASHANDISWA CO, LTD uye MCC BOKA.. Akakunda simbi bhaa splicing zvaidiwa pamusoro renyukireya simba chirimwa chokuvaka pakati Rongcheng uye Lufeng.
2015 - Kunotangwa vakazvimiririra ane Anti-rova simbi bhaa coupling hurongwa kwakaedzwa uye aifarirwa IRR chiGerman, uye akawana nyika bvumidzwa mu CHINA.
2014 - Iva paakavapa ari Qualified nokutengesa CNEC BOKA uye SINOHYDRO Group. Akakunda simbi bhaa splicing zvaidiwa kuti PAKISTAN Karachi renyukireya simba chirimwa chokuvaka k2 K3, akakunda coupler romugove zvaidiwa kuti SOUBRE hydropower chokuvaka kuCôte d'Ivoire.
2013 - Iva paakavapa ari Qualified nokutengesa CNEC rechi24 kambani. Akakunda simbi bhaa splicing zvaidiwa pamusoro renyukireya simba chirimwa chokuvaka pakati Tianwan uye Yangjiang, akakunda coupler romugove zvaidiwa kuti Kaleta hydropower kuvakwa chirimwa muGuinea.
2012 - Iva paakavapa ari Mutsindo Qualified nokutengesa CHINA KUVAKA FIRST Division BOKA KUVAKA & KUITA CO, LTD.. Akakunda simbi bhaa splicing zvaidiwa of kong-Zhuhai-Macao Cross-gungwa Bridge rokuvaka, Wuhan Zimbabwe Center 606 rokuvaka, Xianyang Airport chokuvaka.
2011 - Iva paakavapa ari Mutsindo Qualified nokutengesa ari CHINA KUVAKA THIRD Engineering Bureau CO, LTD.. The Automatic kugadzirwa mutsara couplers kwakasimbiswa ndokuiswa kushanda. Akakunda simbi bhaa splicing zvaidiwa of Shanghai-Kunming njanji rekuvaka, Shenyang pevhu rokuvaka, Zhangcheng mukuru chokuvaka.
2010 - Iva paakavapa kuva mufaro emakambani kubudikidza Hebei Province Government. Akakunda simbi bhaa splicing zvaidiwa of Chengdu International Finance Square rokuvaka, Changsha pevhu rokuvaka, Xi'an pevhu chokuvaka.
2009 - Iva paakavapa kumusoro hwemberi mukugadzira emakambani kubudikidza Hebei Province Government. Akaita indasitiri-payunivhesiti pamwe HEBEI UNIVERSITY OF SAYENZI & TECHNOLOGY mugore iroro. Akakunda simbi bhaa splicing zvaidiwa kuti Shijiazhuang-Wuhan njanji rekuvaka, Beijing-Shijiazhuang njanji tanera chirongwa.
2006 - Kunotangwa vakazvimiririra mukuru-simba dzose polygon simbi bhaa coupler rinovira, uye akawana nyika bvumidzwa mu CHINA. Akakunda simbi bhaa splicing zvaidiwa pamusoro Fuqing simba renyukireya chirimwa rokuvaka, Fangjiashan simba renyukireya chirimwa chokuvaka.
2003 - The yokutanga Vacuum vira akaiswa oparesheni, asi richipedza muitiro unhu simbi bhaa chinotenderera pavakabhabhatidzwa akavandudzika zvikuru. Akakunda simbi bhaa splicing zvaidiwa kuti Zhoushan Jintang muchinjikwa gungwa zambuko chokuvaka.
2000-Quality Management System pamusoro HEBEI YIDA unowedzera BAR unobva TECHNOLOGY CO., LTD. sezvarayirwa chete ISO9001 mureza zvinodiwa.
1998 - HEBEI YIDA muedzo BAR unobva TECHNOLOGY CO, LTD.. rakavambwa.